कुलमान नै किन चाहन्छन् आमजनता ? – Khabar PatrikaNp
कुलमान नै किन चाहन्छन् आमजनता ?
August 26, 2020 28
काठमाडौं । आम जनता कुलमान घिसिङप्रति कति आशक्त छन् भन्ने उदाहरण एकाएक दोस्रो कार्यकालमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रसंगलाई लिएर भाइरल भएको बधाईबाट पुष्टि हुन्छ । मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई बधाईको ओइरो आयो तर कुलमानको पुनर्नियूक्तिको प्रसंगनै झुट थियो ।
मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको भन्दै उत्साहका साथ बधाइ दिन थाले मानिस । यद्यपि, यस विषयमा उर्जामन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो कुनै प्रस्ताव लगिएको थिएन । खैर जेहोस तर उनी आम मानिसको मन मष्तिस्कमा बसिसकेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो बधाइ दिन गरिएको हतारो ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको कुलमानप्रतिको आशक्ति
कुलमान कसरी आम मानिसको मन मतिष्कमा बस्न सफल भए ? चर्चा यसैबाट गरौं
अबको १९ दिनपछि (भाद्र २९) घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ । उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अधिकांश उनको पुरागमन हुनुपर्ने माग गर्छन् । तर केही जमात उनी आफै लोकप्रिय भएकाले उनले अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अवसर पाउनेछन् । यसैमा मरिमेट्नु पर्ने कारण नरहेको बताउँछन् । तर लोडसेडिङको प्रत्यक्ष मार खेपेका आम मानिस त्यही लोडसेडिङदेखि त्रसित छन् ‘कतै कुलमान बाहिरिएपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएर फेरि सास्ती पाउनुपर्ने त होइन ?’
कुनै सयम यस्तो पनि थियो हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुन्थ्यो, त्यो पनि १८/१८ घण्टा । साँझ पर्यो कि सर्वसाधारण वैकल्पिक उज्यालोको जोहो गर्न हतारिन्थे । लोडसेडिङकै कारण विद्यार्थीले रातको समयमा पढ्न पाउँदैनथे भने उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँदैनथे ।
जतिबेला बत्ति आउनेभन्दा जाने समय धेरै थियो अर्थात लोडसेडिङले अन्धकार बनेको थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई कुलमानको आगमनपछि लोडसेडिङ हुने समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ । अध्याँरो नेपाललाई उज्यालो छरेर हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका हेर्न पर्ने अवस्थाबाट आम सर्वसाधारणले मुक्ति पाए । घिसिङको फेक टिव्टर अकाउन्टमा मंगलबार पुनःनियुक्तिको विषय आएपछि समाचार भाइरल बनेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री भन्छन्–कुलमानको नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगिएको छैन
कुलमानको उज्यालो यात्रा
सातौं तहको इन्जिनियरबाट (२०५१ सालमा) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त भएको २ महिनापछि कात्तिकको लक्ष्मीपुजाको दिनदेखि काठमाडौ उपत्यकाबासीले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन । अरुले लक्ष्मी पुजा मनाइरहँदा उनी स्युचाटारको भारप्रेषण केन्द्र पुगे र लोडसेडिङ हुन नदिन अनवरत खटिरहे । ३१५ मेगावाट सम्मको माग धान्न सफल भए ।
कुलमानले सबैभन्दा पहिला उत्पादन भएको एक चौथाइ विद्युत चुहावट हुने गरेकोमा पहिलो वर्षमा तीन प्रतिशतले घटाए । यसले नै उनलाई उज्यालोको यात्रामा अनवरत साथ दिइरह्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा केन्द्रिय विद्युत प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । घिसिङको कार्यकालको पहिलो वर्षमा तीन प्रतिशत विद्युत चुहावट घट्यो । अहिले २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा विद्युत चुहावट १५.१७ प्रतिशतमा सिमित छ । १ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणलाई ७० करोडभन्दा बढी फाइदा हुनेछ । सधंै घाटामा जाने प्राधिकरणले गत आवमा ११ अर्ब नाफा कमाएको छ ।
तर यता केही विद्युतका क्षेत्रमै काम गर्नेहरु भने विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको महसुल बृद्धि गरिदिएका कारण प्राधिकरण नाफामा गएको बताउँछन् । हुन त प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी कोही छैनन । त्यसैले उसले नाफा गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि कुलमानको व्यवस्थापकिय क्षमताका कारण उनको आगमनदेखि नै प्राधिकरण नाफामा गएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले २०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत ग्राहकले प्रयोग गर्ने विद्युत र २०७३ साउनमा सबै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतको शुल्कमा समायोजन गरेको थियो । उनी आउनु ठिक अगाडि समायोजन गरेकाले पनि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सहज भएको केही जानकारहरु बताउँछन् । यता केही विद्युत उत्पादकहरु भने प्राधिकरणले उत्पादकसँग सस्तोमा किनेर आफुले महंगोमा बेचेपछि नाफा गरेको आरोप लगाउँछन् ।
तर अब आम नेपाली जनता फेरि देश लोडसेडिङ भएको हेर्न चाहाँदैनन । कुलमान बाहिरिए कहाँ जालान् र उनका ठाउँमा कस्ता व्यक्ति आउलान भन्ने चासो र चिन्ता दुबै छ । उज्यालो बनाउने कुलमान निरन्तरताको आवाज धेरै उठेको छ । उनको निरन्तरता वा बर्हिगमन के हुन्छ आगामी निकट दिनमै थाहा होला ।
Prevसुदूरपश्चिममा ४ जना बैंकका कर्मचारीसहित थप ४४ जनामा कोरोना पुष्टि
Nextसरकारले काठमाडौँमा बस्ने जनातालाई कोरोनाबाट जोगाउन चाल्यो महत्वपूर्ण कदम
राजधानी काठमाडौँमा, कोठा भाडामा बस्नेहरुलाईआयो ठुलो। खुसीको खबर पुरा हेर्नुहोस १ सेयर गरौ।
काठमाडौँ आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै ९२ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं उपत्यकामा फेरी एक हप्ता ‘लकडाउन’ थपिने सम्भावना.!
भर्खरै जन्मिएको शिशुले चिकित्सक’को मास्क तानेपछि……..!
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29582)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28174)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27810)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24596)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22125)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20902)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15576)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14916)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13580)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13292)
प्रधानमन्त्रीद्वारा धर्मपत्नी राधिका शाक्यलाई टीका
बस है’ भन्दै मुस्कुराउँदै काममा निस्किएका श्रीमानको आयो यस्तो खबर, श्रीमती र बच्चाको भयो बिचल्ली [भिडियो हेर्नुहोस]
श्रीमान बाहिर,नेपालमा श्रीमती गर्भवती।कसको बच्चा भनेर सोध्दा नसोचेको जवाफले सबै चकित,पुरा हेर्नुहोस